Iwu SAFE Banyere Inye Nkwado Na Ọrụ Maka Businesslọ akụ maka Ndị Ahịa Legitet Ndị Mmebi Iwu Ahụ
Azụ ahịa cannabis iwu kwadoro ugbu a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-emepe emepe na United States na nnukwu ụlọ maka uto. Na 2017 naanị, ụlọ ọrụ wii wii dere ọnụọgụ $ 9 ijeri na ahịa, na-atụ anya na uto ahịa ga-ada $ 21 ijeri site na 2021. Ka ọ dị ugbu a, ihe karịrị steeti iri atọ na atọ emeela iwu iji ọgwụ ahụ maka ebumnuche ọgwụ na ebumnuche, gụnyere California , Maine, Massachusetts, Nevada, na District nke Columbia.
Ebe cannabis na-abawanye n’iwu, ọtụtụ steeti na-elele ọgwụ ọjọọ dịka iwu gọọmentị siri dị. Dị ka ndị a, ịgbaso iwu steeti dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na ụlọ ọrụ. Ndi oru itumgbere ahia nke choro iguzobe ahia wii wii n'uzo aghaghi irube isi na usoro iwu di iche.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle echiche iwu gbasara itinye aka na azụmaahịa metụtara ahịa cannabis, ịhọrọ ụdị azụmahịa ị ga-etinye na idobe ụlọ na ụlọ akụ maka azụmahịa.
Họrọ Businesslọ Azụ Ahịa Siri Ike
Steeti ọ bụla nwere ụdị ikikere pụrụiche, yana iwu na ụkpụrụ na-achịkwa ụlọ ọrụ cannabis. Iji rụọ ahịa azụmaahịa ọ bụla metụtara azụmahịa cannabis, ị ga-enwerịrị akwụkwọ ikike site na steeti gị. Mainzọ azụmaahịa azụmahịa marijuana atọ dị adị; ịkụ azụ, ire ahịa, na imepụta ngwaahịa.
A na-achịkwa azụmaahịa dị iche iche na-emetụta ị ofụ wii wii ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ibe ha. Marikọ wii wii na-eto, ịsụcha, idozi ya, idozi ya, na ịkwakọ ọgwụ maka irere ya ma ọ bụ ụlọ ahịa. Ihe oru ngo a choro ezigbo oru aka oru ihe oke na nnukwu ihe mbu.
Azụmahịa ngwaahịa a na-azụta inweta nnweta wii wii, salves, na tinctures site n'ụlọ ọrụ enyere ikike ma nye ha ndị ọrịa na ndị ọrụ ntụrụndụ. Azụmaahịa a gụnyere usoro iwepụ resin na ọgwụ ahụ yana ịmepụta ngwaahịa etinyere maka ọrịre, emesia onye ọchụnta ego ahụ na-ebufe ngwaahịa ahụ etinyere n'ụdị ahaziri na ụlọ ahịa na ebe a na-ere ahịa.
Azụmaahịa azụmaahịa (nke a makwaara dị ka onye mkpokọ ma ọ bụ ndị na-ekesa ya) na-ezo aka na ụlọ ahịa izugbe na-ekwu banyere ire nke ngwaahịa ndị metụtara cannabis na ndị ikpeazụ ikike. Ihe owuwu a na-ebute ọgwụ ahụ site n'aka onye na-azụ wii wii ma ọ bụ onye na-ahụ maka ikikere ma nye ya ndị ọrịa na ndị ahịa ruru eru. Hazi ụdị azụmaahịa a siri ike ma dịkwa ọnụ, mana ụgwọ ọrụ na-enye ego buru ibu ozugbo ọ malitere ịtụgharị.
Tupu ịtọlite ​​azụ ahịa cannabis, ọ kachasị mma ịgakwuru onye ọka iwu nke ama ama n'ọhịa wii wii. Onye ọka ikpe lekwasịrị anya ga-agwa gị iwu niile gbasara iwu gị yana nyere gị aka itinye akwụkwọ ikikere dịka iwu si dị. Statesfọdụ steeti nwere windo ngwa ikikere mepere emepe ebe ana-enye ọtụtụ ikikere otu oge, ebe ndị ọzọ na-amachi ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ikikere yana chọrọ njikwa ike na ịdị adị nke isi obodo.
Onye ọka iwu cannabis nwere ikikere ga - enyere gị aka ịgba ngwa akwụkwọ ikike na nkwado ka ahịa gị nwee ike ibili ma ọsọ ọsọ. Enweghị onye ọka iwu, ị ga-emehie ihe na ngwa ahụ, nke nwere ike gbuo oge ma ọ bụ tufuo usoro ahụ niile. Onye ọka iwu ga-enyere gị aka imezu ihe niile achọrọ iji jide n'aka na ị na-agbasoso anya dị ka usoro akwụkwọ ikikere gị si dị.
Ichekwa ezigbo ala maka azụmaahịa ahịa Cannabis
Needkwesiri ịchọta ebe kwesiri omume maka azụmahịa gị na-ebute cannabis nke ga-adịrị ndị ahịa gị bu n'obi mfe. Factorsfọdụ ihe metụtara ọnọdụ ebe akụrụngwa gị gụnyere ọnụahịa ala na ụlọ ịdị nso ụlọ akwụkwọ, ụka, na ebe a na-elekọta ụmụaka.
Ma ahia nri nri bụ ihe kachasị gị mkpa, ị ga-agbasobere ụkpụrụ mpaghara na mpaghara mgbe ị na-ahọrọ ọnọdụ maka azụmaahịa wii wii. Imirikiti iwu mpaghara na-ekwuputa na azụmahịa ọ bụla metụtara cannabis ga-adịrịrị ihe ruru 1,000 ft n'ụlọ akwụkwọ, ebe a na-elekọta ụmụaka na ụlọ ụka.
You nwere ike ịhazi ndị ọkachamara ụlọ ọrụ maka ndụmọdụ kacha mma mgbe ị na-echekwa ụlọ maka ahịa ahịa cannabis ziri ezi. A ga-eduzi gị otu esi ahọrọ ebe kwesịrị ekwesị ka ị nwee ike ijide mmefu azụmahịa gị dị ka o kwere mee.
Cannabis SAFE Iwu Bank
Agbanyeghị na ihe karịrị ọkara nke steeti ndị United States akwadoro ma dezie iwu igbo, ọtụtụ ndị ụlọ akụ na-azụ azụmaahịa maka ụlọ ọrụ enyere ikike na ụlọ ọrụ maka egwu ntaramahụhụ gọọmentị. Limitationsnweta ikike ụlọ akụ etiti na-aga n'ihu na-amanye ndị nwe ụlọ azụmahịa cannabis ime ihe n'ụzọ bụ isi na ego n'ihi na ha enweghị ike imepe ego ụlọ akụ na ụlọ ọrụ gọọmentị na-echekwa ego.
Ọ dabara nke ọma, mmachi ndị a na-abịa na njedebe na nkwado nke SAFE Banking Act nke ndị omebe iwu California na ndị omebe iwu Illinois. N'okpuru iwu ahụ, a na-ahapụ ndị ọrụ kredit na ụlọ akụ nkeonwe ịnweta obere akwụkwọ nzube iji nyere ha aka inye ọrụ azụmaahịa na ụlọ ọrụ azụmahịa wii wii. Newkpụrụ iwu ụlọ akụ ọhụrụ cannabis ga-egbochi ndị ọrụ gọọmentị ịmanye ntaramahụhụ na ndị ụlọ akụ na-ahọrọ ịrụ ọrụ ahịa metụtara cannabis ziri ezi (CRBs).
Iwu mkpuchi nchekwa a na nchekwa (SAFE) bu n'obi ịnye ụlọ ọrụ nchekwa ego na-arụ ọrụ na azụmahịa cannabis dị mma ma dị mma. Iwu a, nke natara nnabata nke ndị omebe iwu buru ibu ma dị iche iche ga-akwụsị ụlọ ọrụ steeti inyefe ndị nwe obodo iwu na ndị na-arụ ọrụ CRB na steeti ebe wii wii nwere iwu n'okpuru iwu.
Iwu SAFE, nke Ed Perlmutter, Denny Heck, Warren Davidson, na Steve Stivers na-akwado nkwado na ngalaba ụlọ akụ, na-achọ ịkwụsị ndị ọrụ ụlọ akụ gọọmentị maka iyi egwu usoro ịgba ụgwọ ọdịnala naanị n'ihi na ndị na-elekọta ha bụ CRB. Ọ na - achọkwa ichebe ndị ọrụ akụ na - akwụ ụgwọ maka ikpe nke steeti mgbe ha na-arụ ọrụ na azụmahịa cannabis.
Iwu ọhụrụ ahụ na-egbochikwa mbọ ọ bụla steeti ịmanye ụlọ akụ na-etinye ego iji kwụsị inye ndị CRB ọrụ, belata ego mkpuchi ya maka ije CRB, wepụta akwụmụgwọ enyere CRB, ma ọ bụ mee ihe ọ bụla ọzọ e lere anya na ajọ mbunobi na steeti. ebe igbo dị n'iwu.
Creationmepụta ọdụ ụgbọ mmiri a dị mma ga-echekwa ụlọ akụ ọdịnala na ụdị mmegwara ọ bụla nke n'aka ndị na-ahazi ụlọ akụ etiti. Ndi SAFE Banking Act kwenyere ikike nke usoro ịgba ụgwọ ọdịnala iji nye ụlọ ọrụ a aka zuru oke, ya mere na steeti enweghị ike ịtọ ntọala ndị ọzọ maka ọrụ CRB.
Anyị bụ ụlọ ọrụ iwu nchekwa ọrụ zuru oke na Peoria, Illinois. Aha m bụ Attorney Thomas Howard. Enwere m otu nke ndị ọka iwu nwere nghọta, ndị nwere ikike, na ndị raara onwe ha nye na-enye ndị ahịa nọ n'ụlọ ọrụ cannabis ndụmọdụ zuru oke. Anyị na ndị otu m nwere ike inyere gị aka ịmalite, jikwaa ma chebe azụmahịa cannabis gị, akwụkwọ ikike steeti echebere na ikike ime obodo, chọta ebe zuru oke iji zụọ ahịa wii wii gị, na-emetụta ụlọ ọrụ nkwụnye ego iji nye ọrụ ụlọ akụ maka azụmahịa gị metụtara azụmahịa cannabis. .
Anyị ghọtara na ịtọlite ​​azụmaahịa metụtara mkpụrụ osisi cannabis chọrọ nghọta miri emi gbasara iwu siri ike nke iwu metụtara na ngalaba a. Amụma gọọmentị etiti na-achịkwa ịmị mkpụrụ, ịnwe, na ikesa marijuana ga-agbanwe. Maka nke a, ebumnuche anyị bụ inyere ndị ọchụnta ego aka ịmalite azụmahịa na-aga nke ọma na ụlọ ọrụ ọgwụ cannabis ntụrụndụ.
Anyị na-anya isi na ndị ọka iwu ahịa marijuana anyị tozuru oke, ndị nwere oke maara n'etiti gọọmentị etiti, steeti na iwu obodo na-achịkwa ụdị azụmahịa a. Anyị chọrọ inyere gị aka ịnọ n'elu ụlọ ọrụ a na - agbanwe agbanwe mgbe niile site na ịhapụ 100% ịgbaso ụkpụrụ niile dị. Anyị nwere oke mmasị na anyị ijide n'aka na ị ghọtara iwu ọ bụla metụtara ọnọdụ gị ka azụmahịa gị nwee ike ịga nke ọma.
Kpọtụrụ ndị ọka iwu anyị ndị dabeere na Illinois taa iji tọọ oge maka ndụmọdụ. Anyị bịara ebe a iji chekwaa azụ ahịa wii wii gị na nke ọ bụla n'ụzọ.